IIKHABHATHI EZIMHLOPHE ZEKHITSHI EZINAMACWECWE AMNYAMA - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi ezinamacwecwe amnyama
Apha sabelana ngegalari yethu yeekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kunye neetafile ezimnyama ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa, izixhobo kunye nemibono yoyilo.
Kuyo nayiphi na uyilo lwangaphakathi, imibala idlala indima ebalulekileyo ekumiseni ubume ngokubanzi kunye nokujongeka kwendawo. Kwindawo eziqhelekileyo, ezinje ngegumbi lokuhlala kunye nekhitshi, kunokujongwa ukuba iphalethi yombala elula okanye engathathi hlangothi ihlala isetyenziswa enokuthi idibane ngokulula nezinye iinkcukacha zangaphakathi okanye ii-aksenti. Ezi nkcukacha zinokuhlaziywa ngokulula ngaphandle kokuphinda upeyinte okanye utshintshe iziqwenga zefanitshala.
Imhlophe ngumbala ophambili othandwa kakhulu kwizithuba eziqhelekileyo, ngakumbi kuyilo lwekhitshi. I-White ihlala isetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini kuba ihlala inika ukuqaqamba okucocekileyo nokucocekileyo, nkqu nakwizilhouettes ezininzi zekhabinethi ezinobunzima Ukongeza, kuba iikhabhathi zasekhitshini zinokubiza kakhulu, ukusebenzisa umhlophe kuqinisekisa ukuba unekhitshi elingayi kuphuma ngesitayile.
Nangona ukusebenzisa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kunezibonelelo ezininzi, yonke imibala emhlophe enemibala ethe tyaba inomdla wokujonga ukuba ayinazintsholongwane. Isisombululo esilula soko kukongeza umahluko kwiikhabhathi ezimhlophe. Oku kuhlala kufezekiswa ngokusetyenziswa kombala opeyintwe ngodonga owahlukileyo, iithayile ezibuyela umva, ilitye okanye umbala wecompetop.
Imiphezulu yeetafile emnyama ibukeka ngcono ngakumbi xa idityaniswe nekhabhathi ezimhlophe zekhitshi, kwaye nazo azifane zichaphazeleke kumabala amdaka kunye namanqaku afunyanwa ngokufuthi kwii-countertops ezinemibala ekhanyayo. Kulo mfanekiso ungasentla kweetafile zamatye esepha ezimnyama ezineenkcukacha ezintle zemithambo yendalo zibonakaliswe kakuhle xa zidityaniswe nekhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi ezineeMnyama eziPhezulu zeGranite
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi eziMhlophe ezinamaGreyithi aMnyama amaGranite
Iikhabhathi eziMhlophe zaMhlophe zeKhitshi ezinamabala amnyama
Ikhitshi elimhlophe elinee-countertops ezimnyama zeMarble
Ikhitshi elimhlophe elinamaGreyithi aMhlophe
Iikhitshi ezineeKhabhathi eziMhlophe kunye neBrown Countertops
Ikhitshi elineeKhabhathi eziMhlophe kunye nesiQithi esiPhezulu seComputer
Apha ngezantsi kukho imizekelo emihle yeekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezidityaniswe nezinto ezahlukeneyo zethekhnoloji emnyama yokuphefumlela kwakho:
Indibaniselwano exhaphakileyo yeekhitshi zangoku iya kuba ziikhabhathi ezimhlophe zekhitshi kunye negranite emnyama. Lo mzekelo ubonakalisa i-slab elula ethe nkqo yegranite emnyama enika eli khitshi isibheno sangoku, esithandekayo.
Sebenzisa i-countertop emnyama kwisiqithi esisembindini kuphela esenza ukuba kugxile kweli khitshi lincinci.
Inkqubo ye- iikhabhathi zekhitshi cream ngombala omnyama oqinileyo wokubala kunceda ukuzisa ukukhanya ngakumbi kwindawo yokuphekela ekhitshini.
Ngokusebenzisa intle itafile yesepha yamatye kwesi siqithi sikhulu sekhitshi, uyenza ngokufanelekileyo le nto yokulwa nekhitshi nokuba usebenzisa izinto ezifanayo kwiikhawuntara zodonga nakwi-backsplash. Indawo enkulu ebonakalayo ecacileyo ikuvumela ukuba ubonise imithambo yendalo kunye neepateni zelitye olikhethileyo.
Olu hlobo lweGranite luyaziwa ngepateni ekhethekileyo enamachaphaza etsala umdla. Ngenxa yendlela yendalo entsonkothileyo / iinkozo zeli nqaku, kungcono ukuyidibanisa nemimandla ecacileyo enje ngayo yonke ikhabhathi emhlophe kunye nebala eliqinileyo okanye ukubuyela umva komlinganiso.
Usebenzisa imiphezulu yeetafile emnyama enee khabhathi ezimhlophe zasekhitshini inika umahluko onobukrwada obunika ngokwenene imeko yanamhlanje neyangoku kuyo nayiphi na indawo yasekhitshini. Ukongeza umbala kwisithuba ongeza nezinto zokuhombisa ezinje ngezixhobo ezincinci. Umbala unokuyicoca uyilo ngokusetyenziswa kwezigqubuthelo zodonga, ukubuyela umva kunye nomsebenzi wobugcisa. Nayi eminye imizekelo emihle:
Ikhitshi langoku elisebenzisa isitopu esimnyama se-quartz esidityaniswe ngeebhodi ezimhlophe ezihonjiswe ngemigca edityaniswe namashalofu avulekileyo ekugqityweni kweenkuni zendalo.
Ngenxa yokuba uninzi lokugqitywa okusetyenzisiweyo kule ndawo enkulu yekhitshi ukukhanya-iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini, iindonga ezingwevu ezikhanyayo, imigangatho yeplanga ye-beech emhlophe - kusetyenziswa imiphezulu yeetafile zegranite kunceda ukubeka ukujonga konke ngokudibanisa ibhalansi kunye nokungafani nendawo.
uyamangalisa kwaye ndiyakuthanda
Inkangeleko ephefumlelweyo yokuvuna ifezekiswa ngokusebenzisa okumhlophe kwiikhabhathi zasekhitshini ezigcwalisa iinkcukacha zakudala zokwakha zesithuba. Ngokusebenzisa i-countertop emnyama egqityiweyo, sinceda ukongeza umnxeba weenkcukacha zangoku ekhitshini ukuze usinike isibheno esihlaziyiweyo.
I-granite emnyama yayisetyenziselwa ukusonga ngaphezulu kunye namacala esiqithi esikhulu sekhitshi kule ndawo yanamhlanje yekhitshi.
I-granite emnyama ecwebezelayo ezinzulwini zobusuku yeyona nto ilungileyo yokulula kuzo zonke iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini.
Imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama lukhetho lwendalo lokuthelekisa iikhabhathi ezimhlophe. I-Granite ayinasiphelo, yomelele kwaye ibonakala intle.
Imiphezulu yeetafile zegranite emnyama kunye namachaphaza ayo amnyama angwevu amnyama nangwevu ngokuqinisekileyo zidityaniswe kakuhle kunye neethayile zemibala yeglasi emnyama kunye engwevu esetyenziswe kwi-backsplash. Ngapha koko, zinika umahluko ngokuchasene nokugqitywa okumhlophe okuthe tyaba kweekhabhathi zasekhitshini.
I-granite emnyama esetyenziswe kwikhawuntara yesiqithi sekhitshi isebenzisa i-bullnosed edge kunye neekona ezijikeleziweyo ukhuseleko olongeziweyo kunye nentuthuzelo.
Kule khitshi inkulu yaseklasikhi yelizwe, iziqithi zasekhitshini ezijolise kwidayalog-thops-off the corner of its black granite countertop to make the space safe for its users.
Ukusuka eluphahleni oluntsonkothileyo lwekhofu kunye neekhabhinikhi zephondo zaseFrance zekhitshi, eli khitshi likhulu ngokuqinisekileyo likhitshi lokuvuna lamaphupha ethu. Inkqubo ye- Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zakudala zinee-top ze-granite ezipholisiweyo ezimnyama ukongeza indawo yangoku kwisithuba.
iingoma zomtshato zikayise intombi yangqungqa
Lo ngumzekelo obalaseleyo wekhitshi emhlophe yanamhlanje esebenzisa ii-countertops ezimnyama zegranite ukukunceda ukongeza ubunzulu kumbala omhlophe wekhabhinethi.
Umphezulu omnyama wegranite onamachaphaza amhlophe anesibindi wongeza ubume / ubuqili obufihlakeleyo kwisikimu esilula kakhulu esimhlophe ekhitshini.
Leli khitshi elincinci le-L ligcina umbala omnyama omhlophe nomhlophe wee-counters, izixhobo kunye nezixhobo zefenitshala. Isiphawuli seplanethi yegranite emnyama sasetyenziselwa ukunika ikhitshi elimhlophe isibheno sangoku.
Kukho into emangalisayo malunga nokudityaniswa kweekhabhathi ezimhlophe kunye nemiphezulu yeetafile zemabhile emnyama. Le khitshi yanamhlanje isebenzisa zombini iikhabhathi ezimhlophe nezimnyama ezinomtsalane we-marble slab backsplash ukwenza umbono omangalisayo.
Ukuba ufuna umahluko othambileyo kwaye ugcine ukuziva unje ekhitshini lakho, usebenzisa ingwevu kwindawo yakho yokuphekela ikhitshi yenye into elungileyo. Le khitshi yanamhlanje isebenzisa imiphezulu yeetafile engwevu ngokudibeneyo nekhabhathi yayo emhlophe ekhabelwe ngamaplanga. Bona Okuninzi izimvo ezingwevu nezimhlophe zasekhitshini kweli phepha legalari.
Kule mihla ikhitshi lokuvula , insimbi engenasici yayisetyenziswa njengemiphezulu yeetafile endaweni yelitye lendalo. Idume kwiikhitshi zentengiso, i-stainless steel ihlala idunyiswa ngenxa yokugcinwa kwayo kunye nokuqina.
I-satin / i-semi-matte emnyama inyengane ibonakala ilula kancinci kunegranite ecoliweyo koku Uyilo lwepeninsula yasekhitshini . Ukuba ufuna ikhawuntari yakho ikhanye kancinci, ungasebenzisa i-semi-matte finish granite endaweni yoko.
Le inkulu Isiqithi senqanawa yasekhitshini isebenzisa itafile yetyuwa engwevu kunye nepepile ukunika umphezulu ukujonga okugudileyo.
Imiphezulu yeetafile eziBrown zinokudityaniswa nekhabhathi emhlophe yekhitshi ukuba ukhetha ukujonga okufudumeleyo ikhitshi lakho. Ikhitshi lesiFrentshi lisebenzisa i-slab entle yePersa Brown granite ukugcwalisa i-countertop ye-walnut kunye nekhabhathi ekhitshini enombala.
Ngokusebenzisa i-quartz countertop yefantasy emnandi, isiqithi esikhulu sekhitshi ngoko nangoko siba sisiseko sale khitshi yale mihla ikakhulu enabantu abamnyama nabamhlophe.
Ezi zokubala igranite zegranite zinika isixa esifanelekileyo sokufudumala kule ndlela yakudala yeekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini.
ngubani omenyelwa kwishower yomtshato
Ukugcwalisa imiqadi yeplanga ebonakalisiweyo eluphahleni, le khitshi imhlophe isebenzisa iblack solid wood slab as its countertop, kubangela ikhitshi yanamhlanje ene-rustic touch.
Le ndawo intle yokutya ekhitshini ineendawo eziphakamileyo zokuphahla ezenza ukuba ikhitshi elimhlophe libonakale likhanya kwaye linomoya. Ngenxa yokuba iikhawuntari eziphambili zekhitshi zisebenzisa imiphezulu yeetafile ezimhlophe ze-quartz, i-countertop emnyama eqinileyo esetyenziswe kwisiqithi sekhitshi ibonakala ngakumbi.
Oku Uyilo olukhulu lwasekhitshini isebenzisa itafile yegranite emnyama ukongeza umbala kunye nokuhlukahluka kolu hlobo lwasekhitshini lwangoku.
Uyilo oluhle lwangoku lwekhitshi luzisa ndawonye ikhabhathi emhlophe kunye nesiqithi se-quartz esimdaka ngombala esimnyama. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi ziyi-quartz emnyama ukubonelela ngokwahlukileyo ngelixa i-backsplash engwevu ekhanyayo ye-porcelain inceda ukubonelela ngomdla obonakalayo kudonga lwangasemva. Bona Okuninzi Izimvo zokubala ngekhethi kunye neekhabhinethi ezimhlophe Apha.
indlela yokunxiba ilokhwe yomtshato
Iivesi zebhayibhile malunga nobuhlobo nothando
ilokhwe yomtshato elula kodwa entle
Iindlela ezilula zokuphelisa amabala